Soojiidashada Best ba'an In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Soojiidashada Best ba'an In Europe
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 26/09/2020)
Waxaa jira yaraanta ma soo jiidashada leh xad-dhaaf ah ee Europe. doonka ah adrenaline iyo kuwo isboorti ba'an kartaan waayo-aragnimo kala duwan ee Yurub meelaha iyadoo tiro balaadhan oo ah waxqabadyada. Haddii aad la yaaban yihiin sida ay halkaas ka heli tareen, waxaan kugu daboolay, sidoo kale! Halkan waxaa ku xulatay our ugu soo jiidashada ba'an ugu fiican Yurub:
Soojiidashada Best ba'an ee Europe – Innsbruck, Austria
Waayo, maalintii adrenaline-shiday ah, eegi jirin dheeraad ah ka badan Innsbruck ee Austria. Waxaa jira waxyaabo badan oo in la sameeyo, haddii aad raadineyso weeyna xasilloonida ama farax. Iyada oo dad badan oo dalxiisayaasha tag Innsbruck si hufan sababta oo ah muuqaalka idyllic, waxa badan oo dheeraad ah si ay u bixiyaan leeyahay. Waxaad la kulmi kartaa kortaan bobsleigh at Olympiaworld a, boodi bungee qaadan off europabrücke ama booqo skiing. Nature waa breathtaking, iyo views waa mid cajiib ah. Wax kasta oo aad doorato in aad samayn at Innsbruck, mid ka mid ah wax hubaal - ma waxaad noqon doontaa caajiso. Oo waxaad si fudud ka gaari karin tareen. Waxaa isku xira inta kale ee Austria oo weyn oo kale xarumaha tareenka Yurub.
Munich in ay Tareenadu Innsbruck
Oberstdorf in Tareenadu Innsbruck
Soojiidashada ba'an ee Interlaken, Switzerland
Switzerland Ma laga yaabaa in dalkii ugu horeeyay ee aad ka fikirto marka mawduuca waa Soojiidashada Best ba'an ee Europe. Si kastaba ha ahaatee, saftay sida xaqiiqada ah waxay noqon kartaa mid marin habaabin ah. Interlaken waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah goobaha Ra'iisul isboortiga ba'an ee Europe. Waa gobolka ah oo qurux badan si buuxda u qalabaysan in ay ka dhergin caasinimada adrenaline doon ah. Qaar ka mid ah howlaha ee Interlaken waxaa paragliding, aqado, boodada bungee, iyo canyoning. Gaaritaanka Switzerland waa la heli karo tareen, maadaama ay jiraan marinnada ka dalalka deriska ah iyo magaalooyinkii in Europe.
Soojiidashada ee Le Marche, Italy
Bariga Talyaaniga waxaa inta badan loo yaqaan ay tahay, dhaqanka iyo yaabab, Kuliyadda. weli, sumcad tani micnaheedu ma aha in ay jiraan wax kale in gobolka this qurux badan ayaa. Le Marche caan hal sabab u gaar ah oo lama filaan ah. Waxa ay u muuqataa weyn marka aad ku boodaan out of a diyaarad oo duulaya waxa ka badan. skydivers khibrad u ogaado, laakiin Le Marche sidoo kale waa meel fiican si ay isugu dayaan soo baxay Soojiidashada ba'an ee Europe iyo gaar ahaan ugi markii ugu horeysay. Haddii ay tani u muuqataa xiiso leh si aad u, waxaad qaadan kartaa wacan a, tareen muuqaal dabiici ah faraskii fuushan ayuu mariyey Italy si Le Marche.
Florence si Tareenadu Macerata
Florence si Tareenadu Jesi
Rome si ay Tareenadu Ancona
Rome si ay Tareenadu Pesaro
Xad-dhaaf ah ee gutaa Blanc
Sida ugu sarreysa ugu sareeya ee Yurub oo dhan, gutaa Blanc ayaa had iyo jeer soo jiitay ay share cadaalad of visitors. Fuulid in shirwaynaha uusan itaal darnaan ee wadnaha, taas oo ah sababta dalxiisayaal doonaya reyreyn ah u jeclahay. Gutaa Blanc ballan u quudhin, muuqaal riwaayado iyo breathtaking, oo waxay ku keeni doontaa dhibaato qof kasta oo aan kula kulmi kartaa. Waa fasax fiican meel loogu talagalay dadka kuwaas oo raadinaya jiidashada ba'an ee Europe. Oo haddii aadan in niyadda loogu kedis ah, waxaad weli u la kulmaan yaabaa gutaa Blanc dhex paragliding. Haddii kale, sahamiyaan sitoos ah oo ku saabsan mid ka mid ah celin hanuuniyey badan oo gobolka oo caan ah. Waxaad ka gaari karin magaalada Chamonix by tareenka ka dibna safarka si ay u gutaa Blanc saarnaa Blanc gutaa ku Express.
Ma waxaad raadineysaa Soojiidashada aad adrenaline ka buuxo soo socda ba'an ee Europe?
Eeg dheeraad ah lahayn ka badan, kuwaas oo soo jiidashada leh xad-dhaaf ah. Dhamaan goobaha kuwanu waa si fudud loo heli tareen, All inaad sameyso waa Jartaan tikidhka Your iyo qorsheeyaan safarkaaga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-extreme-attractions-in-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#xad-dhaaf ah #traveleurope adventure europetravel Tranride tareen safarka travelaustria travelswitzerland
Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe